Jurassic World - Dzokera kuIsla Nublar Board Game Ongororo - Game Point - Bhodhi uye Vhidhiyo Mitambo
Mutambo mutsva wedino bhodhi mukuyedzwa: Jurassic World - Dzokera kuIsla Nublar naMacro Teubner rakabudiswa naVerlag Schmidt Spiele uye rinoratidza kuve rakareruka uye rinoshamwaridzana nemhuri bhodhi mutambo unovhura musuwo kune iyo genre yemazita ekuvaka dhizaini. Iwo mutambo webhodhi wakavakirwa parezinesi remufirimu kubva kuJurassic World - asi apa ndipo painonamira.
Jurassic World - Dzokera kuIsla Nublar idhizaini yekuvaka bhodhi mutambo wevatambi vaviri kusvika vana, vane makore mapfumbamwe zvichikwira. Panguva ino unoziva zvinhu zviviri. Kutanga, ndezvekutarisira kadhi remaoko. Uye chechipiri: Tichitarisa zera rekupinda mudiki, zita reSchmidt Spiele harigone kunyanya kuoma. Muchokwadi, munyori Marco Teubner anoshandisa akati wandei akasiyana muJurassic World - Dzokera kuIsla Nublar, kubva kwaunogona kuvaka yako Jurassic ruzivo - haina kunyatso kuomarara pakupedzisira, asi kunyangwe kana manomano ese ashandiswa zvizere. , kuchine hwaro hwakasimba hwehutongi, hwekuzvipinza mumatanho ehurongwa hwekugadzirisa.
Jurassic World: Dzokera kuchitsuwa cheZuva
YeJurassic World - Dzokera kuIsla Nublar, muparidzi wechinyakare weBerlin Schmidt Spiele ari kushandisa rezinesi remufirimu rine simba kubva kuAmblin Entertainment uye Universal. Iwe uchiri kukwanisa kuiona mupakiti yakanaka, kana yangobuda uye yakaiswa patafura, zvishoma zvasara zvekuitwa kwetemplate. Kushandiswa kwerezinesi kunongogumira pakushandiswa kweiyo Jurassic World logo uye kupihwa mazita emapoka kubva mumafirimu pamwe nemamwe magiraidhi. Zvikasadaro, iyo dinosaur board game inotaridzika yakapusa, kunyangwe madzvinyu ekutanga anotamba mabasa anotsigira. Dudziro yeIsla Nublar zvakare inotsamwisa - mumafirimu ingangoita rudzi rwechinofanana chechitsuwa chinotyisa chizere nenjodzi.
Pakazara, rezinesi harina kushandiswa nemazvo - logo iripo zvakadaro. Mufananidzo: Volkman
MuJurassic World - Dzokera kuIsla Nublar, humambo hwechitsuwa hunoyeuchidza nezve "Fantasy Island", kwaunogona kurara pamahombekombe muzuva uye kunwa cocktails nekunakidzwa. Ngozi dzinouraya? Dinosaurs veropa? Kunze kweT-Rex uye pamwe Pterodactylus, hapana chinhu chakadaro. Kunyangwe iyo yakanaka triceratops uye stegosaurus "zvinovhimwa" pavatambi - vese vanodya zvinomera. Chero zvazvingava, maVelociraptors ane hungwaru anogona kungowanikwa mune rudimentary fomu pane mamwe mamepu, uye pane humbowo hushoma hwezvisikwa zvakashata kubva panguva dzekare.
Dino theme mune nzira
Izvo hazvina basa, dingindira redhinasori rinozivikanwa zvisina kujeka uye dudziro idiosyncratic yeDeath Island inoita kuti zvive nyore kune vanosvika vana kuti varambe vachitevera. Kunyangwe izvi zvisina kunyanya kuoma pakupedzisira, sezvo paine chiitiko chenguva dzose pabhodhi, asi kwete zvakanyanya. Mabhokisi nemisasa zvinoiswa ipapo, dzimwe nguva mana dinosaurs anodzungaira - ndizvo nezvazvo. Chinonyanya kutariswa chiri pane deck kuvaka system. Uye izvozvo zvinobudirira.
A dino board game isina dinosaurs? Izvo hazvigoneki: Saka kune mhuka ina dzemapuranga. Mufananidzo: Volkman
Vatambi vaviri kusvika vana vanoita nechikwata chavo kuchengetedza mibairo yekutsvagisa yakarasika pachitsuwa. "Chikwata" mune iyi kesi inongoreva kuti mutambo wega wega unotungamira rwendo - kunyangwe zvinganzwika zvakasiyana, Jurassic World - Dzokera kuIsla Nublar mutambo webhodhi unokwikwidza umo zvese nezvehuwandu hwehuwandu hwemapoinzi pakupera.
Vatambi vanotanga nedhisiki yakajairwa uye mutambo uchienderera mberi, vanofanirwa kutenga makadhi-uye dzimwe nguva kuarasa-kuita kuti ave majenareta anogoneka. Kutenderera mushure mekutenderera iwe unotamba makadhi ako emaoko mune yakangwara inogoneka kuronga kuvaka misasa. Iyo yekupedzisira ndiyo chinangwa chikuru, nekuti iyi ndiyo chete nzira yekukonzeresa chiyero zvachose. Izvi zvishoma uye zvinonzwika zviri nyore, asi nekufamba kwega kwega panogara paine sarudzo pakati pekusimudzira dhizaini kana kuunganidza mapoinzi. Chete gare gare mumutambo ndipo zvose zvinobudirira kusvika pamwero unonzwisisika.
Inonakidza mepu kuvaka pasina kushushikana zvinhu
Kugadzirisa dhizaini yako yemakadhi kuitira kuti utarisire musanganiswa unonzwisisika unogoneka uchiri kunakidza, asi kwete kunyanya kudiwa. Saka iwe unoyera zvinhu: kuvaka musasa, isa mabhokisi, tenga matikiti. Hazvisi zvese zvinogoneka nguva dzese nekuda kwekushomeka zviwanikwa - izvo zviri zviviri chete. Kunyanya sezvo iwe uchigona zvakare kuyedza kuisa misasa yako nemabhokisi emidziyo nekuona kumberi kuitira kuti ugone kukwidziridza zvibodzwa. Kazhinji, ma dinosaurs anogona kuisa spanner mumabasa, asi zvakanyanya pane izvo munguva pfupi. Pano neapo iwe unosarudzawo kushandisa makadhi ako sezviwanikwa kana kune chimwe chinhu "chinobatsira". Ipapo iwe unogona, semuenzaniso, kuzvidzivirira kubva pakurwiswa kana kuronga kadhi kana kurasa makadhi uye kudhirowa nyowani.
Pakupera kwezuva, zvinhu zvidiki zvese zvinoreva kuti iwe unofanirwa kufunga nezve zvekuita mukurongeka kuitira kuti uwane mapoinzi akawanda sezvinobvira pakufamba. Iko hakuna nguva yakawandisa yeiyo, nekuti mutambo unopera mushure meanenge maminetsi makumi matanhatu nekuti imwe yematatu emagumo mamiriro asangana. Saka musimboti ndewekuti: Wana zvakawanda sezvinobvira pabhodhi rezvibodzwa munguva pfupi-pfupi inokwanisika - uye usanyanya kupambadza nezviito zvako.
chimwe chezvakasiyana chakaiswa muzviyero. Mufananidzo: Volkman
Kune mamwe mazano ehungwaru, asi iyo dhizaini yekuvaka genre yeJurassic World yakashandiswa zvizere - asi kwete kudzokera kuIsla Nublar. Uku kutukwa uye chikomborero panguva imwe chete. Kune rimwe divi, iyo yakasiyana-yemahara yemusimboti mutambo unobvumirawo vakangoita zvemitambo uye vana nzvimbo isina kuomesesa yekuonana nedhiki-yekuvaka bhodhi mitambo, kune rimwe divi, iwo akadzama musanganiswa anozivikanwa kubva kuDune: Imperium, semuenzaniso, inofashukira pa. imwe pfungwa. Kana iwe ukashandisa ese modular akasiyana akagadzirwa naMarco Teubner, iwe unenge uine akakwana ehurongwa sarudzo dziripo kuti uwedzere mapoinzi. Iwo anotengwa emakadhi emakadhi uye mamwe ekuwedzera mabhonasi anoita mutambo weJurassic World - Dzokera kuIsla Nublar zvakanyanya kunakidza. Kunyanya, kufambira mberi pafaction bar kazhinji kunotungamira kune yakanaka masanganiswa ezviito uye kuwedzera mutambo nedanho resarudzo.
Uye dinosaurs? Vanoita basa rekutsigira. Kubva mumakomo adzo anoputika, mhuka idzi dzinotama dzichidzika mumapani echitsuwa ichi kuti dziite kuti misasa yevatambi nemabhokisi emidziyo zviyerere. Makadhi anosarudza paanofamba. Dzimwe nguva kumanikidzwa, dzimwe nguva kukonzerwa nemaune. Chaizvoizvo, iyo Dino kufamba ndiyo yega inopokana mune ino bhodhi mutambo, zvikasadaro iwe unotamba padivi nepadivi uye kukwikwidza pane zvibodzwa. Hongu, dingindira rakanyanya kugadzirwa uye rezinesi ringadai risiri kudikanwa kumutambo webhodhi, asi madhinosauri nemazita anozivikanwa kubva kuJurassic world inokurudzira yakanaka kubata nemusoro. Zvirinani maDinosaurs anowedzera imwe yekunetsa nekuti unogona kuputsa misasa nemakireti akamisikidzwa nevashori anogona kunge akaisirwa remangwana rine mubairo wezvibodzwa.
Pamusoro pazvose, mabhonasi anoshandisika emusiyano weboka anokurudzirwa - vanova nechokwadi chekuchinja kunooneka panguva yemutambo padanho rehungwaru, nekuti madhinaini anogona zvakare kutamiswa mune mamwe maitirwo - zvikasadaro chete pasi - unogona kupesvedzera ruoko rwemakadhi. kana kuti pakupedzisira unogona kuzadza akaundi yako yemapoinzi uye kuvhura rimwe bhokisi remidziyo, iro rinogona kushandiswa zvine musoro pakuvaka musasa kana senzvimbo yemapoinzi.
yechipiri musiyano: zvikwata zvinopa mabhonasi - ndeipi panguva iyo inongoitika panguva yekuvaka. Mufananidzo: Volkman
Panyaya yehunyanzvi, muvaki wedhizari Jurassic World - Dzokera kuIsla Nublar naSchmidt Spiele yakasimba kuita zvakanaka: Mutambo webhodhi unoedza kukwezva mapoka akati wandei, unopa inosimudzira dhizaini yekuvaka uye inogona kuridzwa pasi mukunakidza. nguva yakawanda. Nekudaro, iwe unozotarisa pasina kune echokwadi matambudziko uye kuvhima mapoinzi hakusi nguva dzose kunakidza zvakaenzana kune vese vatambi, nekuti dzimwe nguva zvinosarudzwa pachine nguva kuti unogona kuenderera mberi here kana kuti unosiiwa nevapikisi vako nekuda kwekurasika mafambiro. Zvinobva zvaoma kubata, nekuti haungazvibvumire iwe kukanganisa kwakakura gare gare mumutambo nekuda kwezviito pane imwe nguva. Mutambo uyu unogona kuramba uchinakidza nenzira iyi, asi hazvifanirwe kuve - kune kushungurudza kweavo vanofanirwa kumira kutenderera mushure mekutenderera, kunyangwe vachiziva kuti kukunda hakuchagoneke.
Genre: Mhuri bhodhi mutambo
Sub-genre: dhizaini yekuvaka bhodhi mutambo
Core mechanics: dhizaini kugadzirisa, mapoinzi
Munyori: Marco Teubner
Mifananidzo: Universal, Nathalie Langer
Muparidzi: Schmidt Spiele
Mutengo: anenge 40 euros
Semunhu anofarira Jurassic Park uye Co, ungangoda kuzunungusa Schmidt Spiele: haugone kuwana mubvunzo wekusashandisa rezinesi kubva mumusoro mako. Chitsuwa chezuva chine mavara akajeka chinopa mucherechedzo, asi kwete nyaya yakakura. MaDinosaurs aripo mumutambo, asi anowedzera chete. Nyeredzi yeJurassic World - Dzokera kuIsla Nublar pasina mubvunzo ndiyo mechanic yekuwedzera, asi yaisada rezinesi kwayo. Paradox.
Zvakangodaro, iwe unofarira kutora Jurassic World newe senyaya yehurongwa, nekuti rezinesi hariite kuti bhodhi rekuvaka kadhi riwedzere. Zvinopihwa naMarco Teubner naSchmidt Spiele ndeyekuvhura gonhi mumhando yemazita ekuvaka dhizaini. Saka usatarisire kuoma kwakawanda. Kunyangwe nekushandiswa kuzere kweiyo - inogamuchirwa uye inonzwisisika - misiyano, haungazosangana nematambudziko semurwi. Mapoinzi akazara zvinoreva kuti pakupedzisira. Kune boka revatambi, izvi zvinoreva zvakare: chero munhu wese ari padanho rakafanana kana, mune yakaipisisa, kushushikana kunomuka.
Iyo inovaraidza dhizaini-yekuvaka chinhu haigone kuvanza chokwadi chekuti hapana zvakawanda zvinoshamisa zviri kuitika patafura yemitambo. Dzimwe nguva dinosaur inobvisa matende, asi kazhinji tableau inenge ichangobva kumisa misasa nemabhokisi sekuona-kure sezvinobvira uye ichifunga nezvenjodzi, kuitira kuti igozosarudza chibodzwa. Zvinonyadzisa, nekuti chimwe chiitiko chidiki paIsla Nublar chingave chakanakira maitiro ese.
Kutaura chokwadi, Schmidt Spiele haavanzike chokwadi chekuti Jurassic World - Dzokera kuIsla Nublar mutambo wemhuri une zera rekutanga - mune izvi zita rinoita basa raro nemazvo. Vatambi vemazuva ese nevana vanopihwa "deck rekuvaka mwenje" iyo yakanyatsogadzirwa uye saka inoshanda. Chero tweaks kune yako dhizaini inogona kuita zvine musoro uye chaizvo kuve nemhedzisiro yakanaka pakukora. Mukuwedzera, zvakakosha kufunga nezve kurongeka kweketani yakakonzerwa yemakadhi - misiyano dzimwe nguva yakakomba. Uye: Iwe unodzidza nekukurumidza kubva mukukanganisa kwako kana kuwana nzira dziri nani dzekuita purofiti kubva muruoko rwako rwemakadhi - ese ari maviri anokurudzira uye anonakidza kwazvo. Uye kana iwe ukabatanidza izvo zvakasiyana, zvinova nekunyengera, zvirinani pakutanga.
Uye kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvebhodhi mutambo kubva pamaonero emunyori, unogona kuzviwana pano Hurukuro naMarco Teubner.
Schmidt Mitambo 49389 Jurassic World, Dzokera kuIsla Nubar,... * Parizvino hapana ongororo 33,99 EUR tenga
Jurassic World - Dzokera kuIsla Nublar
mhedziso Jurassic World - Dzokera kuIsla Nublar ndeimwe yemhando dzisina kudzika pakati pevatambi vekuvaka dhizaini. Iko hakuna kuwanda kwawo, saka mutambo webhodhi une zvikonzero zvawo pamusika. Izvo zvakanakisa rudimentary yakashandiswa rezinesi inosiya munzira yezvinobvira, kanenge michina yacho inobuda zvakare. Ndiyo yekupedzisira inoita kuti Jurassic World - Dzokera kuIsla Nublar inakidze.
Kare 7 Wonders Architects ndiyo "Generational Game"
Inotevera WWE 2K22: Banzai Paki ine mitsimba mitsva inorema
Sony vs. Microsoft vs. Nintendo: ndiani achakunda 2019 console hondo?
(kwete) #schissyear: gore rekuongorora 2016